မင်း Weed သောက်တယ်မလား… -
#!30လာ, 22 Nov 2021 09:57:34 +0000p3430#30လာ, 22 Nov 2021 09:57:34 +0000p-9+00:003030+00:00x30 22မနက်30မနက်-30လာ, 22 Nov 2021 09:57:34 +0000p9+00:003030+00:00x302021လာ, 22 Nov 2021 09:57:34 +00005795711မနက်တနင်္လာ=1153#!30လာ, 22 Nov 2021 09:57:34 +0000p+00:0011#2021#!30လာ, 22 Nov 2021 09:57:34 +0000p3430#/30လာ, 22 Nov 2021 09:57:34 +0000p-9+00:003030+00:00x30#!30လာ, 22 Nov 2021 09:57:34 +0000p+00:0011#
#!30လာ, 22 Nov 2021 09:57:34 +0000p3430#30လာ, 22 Nov 2021 09:57:34 +0000p-9+00:003030+00:00x30 22မနက်30မနက်-30လာ, 22 Nov 2021 09:57:34 +0000p9+00:003030+00:00x302021လာ, 22 Nov 2021 09:57:34 +00005795711မနက်တနင်္လာ=1154#!30လာ, 22 Nov 2021 09:57:34 +0000p+00:0011#နိုဝင်ဘာ#!30လာ, 22 Nov 2021 09:57:34 +0000p3430#/30လာ, 22 Nov 2021 09:57:34 +0000p-9+00:003030+00:00x30#!30လာ, 22 Nov 2021 09:57:34 +0000p+00:0011#
#!30လာ, 22 Nov 2021 09:57:34 +0000p3430#30လာ, 22 Nov 2021 09:57:34 +0000p-9+00:003030+00:00x30 22မနက်30မနက်-30လာ, 22 Nov 2021 09:57:34 +0000p9+00:003030+00:00x302021လာ, 22 Nov 2021 09:57:34 +00005795711မနက်တနင်္လာ=1155#!30လာ, 22 Nov 2021 09:57:34 +0000p+00:0011#22#!30လာ, 22 Nov 2021 09:57:34 +0000p3430#/30လာ, 22 Nov 2021 09:57:34 +0000p-9+00:003030+00:00x30#!30လာ, 22 Nov 2021 09:57:34 +0000p+00:0011#
” Weed ဝိသောက်ခြင်း ကဘာတွေဖြစ်နိုင်သလဲ ? “
ယနေ့ လူငယ်တွေတော်တော်များများကြားမှာ ” သားကြီး High နေတာလား ” စသည်ဖြင့်မေးလိုက်ရင် အချင်းချင်းသိကြပါတယ်။ လူငယ်ပြီပြီစူးစမ်းတဲ့ သဘာဝအရ Weed သောက်တယ်၊ Brownie စားတယ်၊ High တယ် စသည်ဖြင့် အပန်းဖြေကြတဲ့ အချိန်မှာ ဒီ Weed ကကျန်းမာရေးအတွက် ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် ဘာတွေထိခိုက်မှုရှိလဲ? ဘာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိလဲ စတာတွေကိုတော့ သိထားသင့်ပါတယ်။
Weed က Marijuana လို့ခေါ်တဲ့ အလွယ်ပြောရရင် ဆေးရွက်ကြီးတစ်မျိုးပေါ့ Cannabis plant ကရတာဖြစ်ပါတယ်။
လူငယ်တွေပြောနေကြတဲ့ Weed သောက်ရင် High တယ်ဆိုတာတော့ ခန္ဓာကိုယ်ကနေ Dopamine ဆိုတဲ့ ဟော်မုန်းလေးတစ်မျိုးထုတ်လိုက်တဲ့အခါ ဦးနှောက်က Pleasure လို့ခေါ်တဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုကို ခံစားရတယ်။ လူကိုလည်း အပန်းပြေသွားစေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် Weed ကကောင်းတာလား?
လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်က ခံစားရပုံမတူပါဘူး။ အချို့လူတွေမှာ စိတ်ပူတာတွေ၊ ကြောက်လန့်တာတွေ၊ စိတ်ဓါတ်ကျတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အချို့မှာတော့ သုံးစွဲတဲ့ ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး အရမ်းများသွားရင်တော့ လေထဲမှာ လွင့်နေသလို ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ကင်းကွာပြီး တကယ်မရှိတာတွေ မြင်တာ၊ ကြားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကမတူတဲ့အတွက် အချို့လူတွေမှာ စွဲတတ်ပါတယ်။ ဖြတ်လိုက်ရင်အိပ်မပျော်တာတို့၊ဂနာမငြိမ်ဖြစ်တာ၊အစားမဝင်တာ၊ စိတ်ဆတ်တာ စသည်ဖြင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
-ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်သုံးရင်ကလေးမှာ ပေါင်ချိန်ကျဆင်းတာ စတာတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။
-အရမ်းအသုံးများရင်တော့ အမျိုးသားအင်္ဂါနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခြားသော ကင်ဆာတွေနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိမရှိကတော့လေ့လာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
-အနာသက်သာစေတာ၊ စိတ်ပူပန်တဲ့ရောဂါတွေ၊ အစားမစားနိုင်တာတွေ၊ အိပ်စက်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ရောဂါတွေ၊ ကြွက်သားရောဂါ စတာတွေမှာ သုံးစွဲကြပါတယ်။
ကွက်ကီးတွေ၊ ကိတ်တွေ၊ သကြားလုံး၊ စတာတွေမှာလည်း ထည့်သွင်းလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အခုဆိုရင် လူငယ်တော်တော်များများကြားမှာ ရေပန်းစားတဲ့ Weed အကြောင်းအနည်းငယ် တီးခေါက်မိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ” သားကြီး High မယ်” ဆိုလည်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးပဲမို့ ဆင်ခြင်ကြဖို့တိုက်တွန်းရေးသားလိုက်ပါတယ်။
Ref: WebMD, NHS, Healthline
ကျန်းမာရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းများမေးမြန်းလိုပါက HOPE မှ ဆရာဝန်တွေကို မနက် ၈နာရီမှည ၁၀ နာရီ အတွင်း အခမဲ့ မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ရှင့်..
weed #rollingpaper #smoke
hope #ကျန်းမာရေး #ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း
Nov 22, 2021 ကျန်းမာရေးဆောင်းပါးများ, ကျန်းမာသော ဘ၀နေထိုင်မှုနှင့် အလှအပ